DEG DEG:Muuse Biixi oo looga yeedhay dalka Imaaraadka Carabta & Heshiiskii DP World oo qarka u saaran in uu bur buro + Farmaajo oo isna ku wajahan….. | Puntland News
Wararka Warsidaha Puntlandnews.net uu haatan ka helayo magaalada Hargeysa ee caasimada maamulka Somaliland ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu goor dhow u duuli doono dalka Imaaraadka Carabta.
Ujeedka safarka Mr. Biixi ayaa salka ku haya xiisado culus oo ka dhex aloosan dhinacyada Imaaraadka Carabta iyo dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii is hor taag ay ku samaysay dowladda Soomaaliya hirgelinta heshiiskii shirkadda DP World ay kula wareegtay dekadda magaalada Ber-Bera kaas oo ay bur buriyeen Baarlamaanka Soomaaliya kadib mooshin gacan taag ah oo loo qaaday heshiiskaasi.
Hogaamiye Biixi ayaa kala hadli doono madaxda dowladda Imaaraadka Carabta aqoonsi ay hesho Somaliland iyo sidoo kale qaab walba oo khal khal siyaasadeed loogu abuuri karo dowladda federaalka Soomaaliya si uu u hirgalo heshiiskaasi oo caqabad weyn ay ku noqdeen madaxda ugu sar saraysa dowladda federaalka Soomaaliya.
Dowladda Imaaraadka Carabta iyo madaxda Somaliland ayaa iska kaashan doona sidii Ethiopia loogu isticmaali lahaa khal khal galinta Soomaaliya, waxaana dhankiisa isna maanta ka duulay magaalada Muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku wajahan dalka Qatar si uu ugala xaajoodo madaxda dalkaasi heshiis rasmi ah oo dhex mara labada dowladdood oo Qatar ka fulin doonto Somalia mashaariic waa weyn oo ay ka faa’iidaystaan shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo iyo hogaamiye Biixi ayaa la kala safan dowladdaha Qatar iyo Imaaraadka, waxaana weli sii xoogaysanaya xiisadaha salka ku haya dekadda Ber-Bera iyo saldhiga Malateri ee Imaaraadka laga siiyey Ber-Bera.